Saraakiisha Nebraska waxay raadinayaan noocyo kaladuwan oo ah coronavirus iyaga oo iskudayaya genome | KWIT
Saraakiisha Nebraska waxay raadinayaan noocyo kaladuwan oo ah coronavirus iyaga oo iskudayaya genome
By Halima Osman • Feb 22, 2021
Saraakiisha Nebraska waxay raadinayaan noocyo kaladuwan oo ah coronavirus iyaga oo iskudayaya genome-ga tijaabooyinka tijaabada ee dhowaa. Illaa iyo hadda, shaybaarku ma uusan aqoonsan noocyada ugu waaweyn ee fayraska ee markii ugu horreysey laga aqoonsaday Boqortooyada Ingiriiska iyo Koonfur Afrika. Laakiin cilmi baarayaashu waxay heleen laba isbeddel oo kale oo laga yaabo inay saameyn ku yeeshaan awoodda fayrasku u leeyahay cudurrada iyo calaamadaha daran.
Dhakhaatiirta Iowa waxay yiraahdaan waxaa jira boodbood laga naxo oo ku saabsan isku dayga is-miidaaminta ee dhallinta, iyo masiibada COVID-19 ayaa inta badan eedda leh. Dhamaadka bisha Janaayo, Xarunta Xakamaynta Sunta Iowa, oo fadhigeedu yahay magaalada Sioux City ayaa ogaatay koror weyn oo 11 ilaa 14-sano jir gabdho ah oo isku dayaya inay naftooda wax yeelaan. dawada la liqo.
Tirada kiisaska COVID-19 iyo natiijooyinka baaritaanka togan waxay kusii dhacayaan Degmada Woodbury. Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu kudaray lix kiis oo cusub Isniinta. Heerka waxtarka leh ee 14-maalin tijaabada ayaa hoos u dhacay boqolkiiba-dhibic tan iyo jimcihii heerka hadda ah 5%. Labada isbitaal ee magaalada Sioux City waxay daweynayaan guud ahaan 15 bukaan ah. Heerku wuu taagnaa dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay, oo ay ku jiraan tirada dhimashada ee 210.
Waaxda saadaasha hawada ayaa sheegtay in lix inji oo baraf ah uu shalay ka da’ay magaalada Sioux City.
Khubarada saadaasha hawadu waxay soo wariyeen in meelo badan ay heleen baraf aad uga badan intii la filayay sababtoo ah koox baraf aad u culus ah oo ka curtay bartamaha iyo bariga Siouxland.
Caafimaadka Degmada Siouxland ayaa ka warbixisay laba qof oo kale oo ku dhimatay Gobolka Woodbury Ji
By Halima Osman • Feb 19, 2021
Caafimaadka Degmada Siouxland ayaa ka warbixisay laba qof oo kale oo ku dhimatay Gobolka Woodbury Jimcihii 210 dhimasho ah sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19 intii lagu jiray Faafida. Heerka waxtarka ayaa xoogaa kor u kacaya 6%. Isbitaalada ayaa ku dhowaad 15% leh 14 bukaan oo ku yaal Sioux City labada xarumood ee caafimaad. Gobolka oo dhan waxaa jira 241 bukaan, oo 60 ka mid ah ay ku jiraan daryeel degdeg ah. Taasi waa hoos udhac yar maalintii hore.